Gmail မှာပုံကို မည်သို့ထည့်သနည်း - MYSTERY ZILLION
Gmail မှာပုံကို မည်သို့ထည့်သနည်း
March 2009 edited April 2009 in Internet & Email
ကျွန်တော်နေရာမှားပြီး Post လုပ်မိလျှင်ခွင့်လွှတ်ပြီး နေရာမှန်ကိုပို့ပေးပါ MOD များခင်ဗျား။
အခုကျွန်တော်သိချင်တာက gmail မှာ email ပို့လျှင် email ရဲ့ body အတွင်း ပုံများကိုမည်သို့သွင်းသည်ကို သိချင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး copy/paste လုပ်လို့ရမှန်းသိပေမယ့် တကယ်ပို့လိုက်တဲ့အခါ reader/receiver ဖွင့်ဖတ်ရင် ပုံပေါ်အောင် "Display Images Below" ကိုနှိပ်ပြီးမှ ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ "Display Images Below" မပေါ်ဘဲ စာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ body မှာ ပုံတွေတန်းပေါ်အောင်မည်သို့လုပ်ရပါသလဲ။ ကျွန်တော်ဒီ အသေးအမွှားလေးကို internet မှာရှာဒါ အဖြေမတွေ့လို့ ကူညီကြပါအုန်းလို့!!!
CrazyandLazy wrote: »
အဲဒါသိတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်သိချင်ဒါက အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ အောက်ကပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီး ကူညီပေးပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူး ဂေါ်ဇီလာပါ ခင်ဗျာ:77:။
ဒီလင်ခ့်မှာသွားကြည့််လိုက်ပါလား ။ အဲဒီလိုမျိုးပြေားတာလားမသိဘူး
မရဘူး ကို kyawmin ရေ့။
သူများသားသမီးတွေ ဘယ်လို Forward လုပ်လဲမသိဘူး။ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပုံတန်းပေါ်တယ်။ ကျွန်တော် ဒီဟာကို အဖြေရှာဒါ နှစ်ရက်ရှိပြီ။ အဖြေမရဘဲ တခြား ပြသနာရဲ့ အဖြေတွေပဲ ရ ရ နေတယ်။ ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ။:D
ပထမဆုံး ဂျီမေးလ်အကောင့်၂ခုလိုမယ်ဗျ....အစ်ကိုပို့ချင်တဲ့ပုံတွေကို အစ်ကိုမေးလ်နောက်တစ်ခုကိုပို့လိုက်ပါ။ ပြီးရင်အဲဒီမေးလ်ကနေ "Display Images Below" လုပ်ပြီး forward နဲ့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့လူဆီကိုပို့ကြည့်ပါလား?
ရမရသိချင်ရင်တော့ အကောင့်၃ခုနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့။ forward ကို အစ်ကို့အကောင့်နောက်ထပ်တစ်ခုထဲပို့ပြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့ရမလားလို့...ကျွန်တော်တော့မစမ်းရသေးဘူး အပြင်သွားစရာရှိလို့ဗျ...
your images must be online.
After that you can drag and drop images from websites to your gmail in compose.
I am not sure, this isacorrect answer or not.
Firefox Add-on လေး ထည့်ကြည့်ပါလား.. ImgaeTweak လို့ခေါ်တယ်ဗျ..
ညမီးအိမ် နဲ့ mgpyone နည်းလည်းမရဘူး။
ထားလိုက်ပါတော့။ ကျွန်တော် copy/paste လုပ်ပြီး ရိုးရိုး send လိုက်တော့မယ်။
အဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်တာ ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ ရလိုက်တယ်ဗျ...။ နောက်မှ ထပ်လုပ်ကြည့်တာ မရတော့ဘူး..။
Gmail ကို ..မိမိကွန်ပြူတာထဲက နဂိုမူလပါလာပြီးသား Outlook Express ဖြစ်ဖြစ်..Outlook 2003 ဘာညာဖြစ်ဖြစ်..Window Mails ဖြစ်ဖြစ်...အဲဒီဟာတွေထဲက တစ်ခုခုမှာ ...ယူသုံးပြီး...ပုံတွေ တိုက်ရိုက် (Insert Image/Picture) ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ထည့်သွင်း ပို့ပါတယ်...
အဲဒါ ..ကျနော် အမြဲသုံးနေကျ နည်းလမ်းပဲ...
Gmail ကို Window ရဲ့Window Mails နဲ့ ..configure လုပ်ထားပြီး... ပုံတွေ တိုက်ရိုက်ပို့ချင်ရင်..ဝင်သုံးပါတယ်...
(Configure လုပ်ပုံလုပ်နည်းကလည်း...Gmail ရဲ့Setting ထဲက Forwarding & POP/IMAP အောက်မှာ .. Enable POP status ထားပြီး ... သူပေးထားတဲ့ Configuring Instruction တွေအတိုင်း..အဆင့်လိုက်လေး..လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ .. အခြေခံလောက်တောင် မသိတဲ့ ကျနော်...Gmail ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း လွယ်လွယ်ကူကူ လိုက်လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်)
အဲ ...ပြောချင်တာက... Gmail လိပ်စာနဲ့ပဲ Window Mails/Outlook တွေကနေ...မေးလ်တွေ ပို့နိုင်သလို... ပုံတွေကိုလည်း...တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်း Insert လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..
အဲဒီထဲကနေ ပုံတွေထည့်လိုက်ပြီး Gmail မေးလ်ပို့တဲ့အခါ...တဖက် လက်ခံရတဲ့သူအတွက်..(နဂို Gmail ထဲမှာ ပုံထည့်ပြီးပို့ရင် ...Display Image Below) ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ကြီးနဲ့ ပုံကို Cover လုပ်ပေးထားတာမျိုး မတွေ့ ရတော့ပဲ...မေးလ်ထဲမှာကို ပုံက...တခါထဲ တန်းပေါ်ပေးလို့....(ပုံတွေပို့ချင်တဲ့အခါ/File Attach နဲ့ မလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုး)... Window Outlook နဲ့ Gmail ကို...ကျနော်သုံးလာခဲ့တာ...တစ်နှစ်နီးပါး ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ...
www.mysteryzillion.org/mmglite နဲ့စမ်းကြည့်ပါလား အဲဒီမှာ ပုံထည့်တာပါတယ်
ကျွန်တော်အရင်ကတော့ လုပ်ဖူးသလိုဘဲ သေချာမမှတ်မိတော့ဘူးဗျား
Hello fri, i think we can insert image by enabling Inserting image feature @ gmail's Settings >> labs.
သင်္ကြန်မှာ အားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေ:6:
Gmail Settings > Labs > Inserting Images > Enable
This Function is now available to Gmail.
May be starting from April 8.
[SIZE=-1]I was waiting for one such feature.
If not, I 've to use this function through Outlook Express with Gmail for quitealong time.
Anyway, Thank you Gmail Team. :77:
I have this error. how can i do to use outlook2003 ?:77::77::77:
Task 'pop.gmail.com - Receiving' reported error (0x8004210A) : 'The operation timed out waiting foraresponse from the receiving (POP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).' (:((:((
I cann't also search in this page
Be Happy New Year :103::103::103:
ပထမဆုံး gmail ကိုဖွင့်ပြီး setting ထဲ၀င်ပါ။ အဲဒီမှာမှ Genreal တွေ Accounts တွေအတန်းက Labs ထဲမှာ Inserting images ဆိုတာကို Enable လိုက်ပါ ဒါဆို compose လုပ်တဲ့အခါ Bold တို့ underline တို့လုပ်တဲ့ အတန်းမှာ Insert Image ဆိုတဲ့ အိုင်ကွန်လေးတစ်ခု တိုးလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အိုင်ကွန်လေးကို နှိပ်ပြီး စာကိုယ်မှာ ထည့်ချင်တဲ့ ပုံ ထည့်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။